कता पुग्यो नेकपाको तलसम्मको एकता ? लेनिन जयन्तीमा साइत ? - Jhilko
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता घोषणा भएको पुग न पुग एक वर्ष हुन लागेको छ । गएको वर्ष जेठ ३ गते घोषणा भएको एकताको मेलो नसरेकोले कार्यकर्तामा उत्साह भने मरिसकेको छ । विभिन्न तहमा पदको आकांक्षी कार्यकर्ताहरु गलेर भुतुक्कै भएकोले होला यतिखेर बाँकी तहहरु गठन गर्न नेताहरुलाई अवश्य सहज हुन पुगेको छ ।
पार्टीकोे केन्द्र, स्थायी समिति र सचिवालय गठन भइसकेको छ । तर कम्युनिष्ट पार्टीको विचार उत्पादन गर्ने पोलिटब्युरो अझैसम्म बनेको छैन । जनवर्गीय संगठनहरु एकाध वाहेक अझै साविक पार्टीका साविक संगठनका रुपमा सामान्य दिनचर्यामा छन् ।
यता पार्टी सूत्रहरुले भने पार्टी एकताको गृहकार्य फेदैसम्म टुंगिएको खबर चुहाएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिका जानुअघि जिल्लाका इच्चार्ज र सचिवको टुंगो लागिसकेको स्रोतको दावी रहेको छ । त्यसमध्ये केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पनि बाँडफाँड भइसकेको बुझिएको छ । रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेलको गृहकार्यले मुख्यतः टुंगो लगाइसकेको र अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिकाबाट फर्किएपछि त्यसलाई दुई अध्यक्षले अन्तिम रुप दिने बताइएको छ ।
पूर्व एमालेको गुटबन्दीकै कारण मुख्यतः पार्टी एकताको मेलो नसरेकोले अहिले दुई अध्यक्षले एकता सक्ने गरी निर्णय गरिसकेको पनि सूचना छ । अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिकाबाट पर्सि विहीवार नेपाल आउनासाथ पार्टी एकताको बाँकी काम सकिने स्रोतको दावी छ । आगामी बैशाख ९ गते लेनिन जयन्तीको अवसर पारेर पार्टी एकता सम्पन्न भएको घोषणा हुनसक्ने पनि अडकलबाजी गरिन्छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी एकता सम्पन्न भएको घोषणा आश्चर्यचकित पार्ने ढंगले आउने मन्तव्य दिइरहेको बेला बैशाख ९ लेनिन जयन्तीको साइत मिति हल्ला बाहिर आएको हुन सक्छ । यो मितिमा पनि एकताको पूर्णता सर्दै गयो, भएन भने नेकपाको विचलन हदैसम्म हुने विश्लेषकहरुको राय छ ।
विप्लव समूहका तीन जना कार्यकर्ता पक्राउ
‘कोरोना भाइरस जोखिम हुँदा टोखा महोत्सव’ स्थगित
“विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेको सूचनाअनुसार भारतलगायत नेपालमा पनि उच्च जोखिम...
अमेरिकी प्रतिबन्धपछि पनि हुवावे झनै बलियो
अमेरिकीहरुले खासै प्रयोग नगर्ने हुवावे टेक्नोलोजिज लिमिटेड हाल विश्वमै स्मार्टफोन...
गण्डकी प्रदेशमा ‘हेलो डक्टर हटलाइन’ शुरु
चिकित्सकको परामर्शपछि मात्रै तत्काल अस्पताल जानुपर्ने वा घरमा नै बसेर आराम गर्दा...
झापामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन शुरु
झापामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जैविक तथा वैयक्तिक विवरण सङ्कलन कार्य आजदेखि शुरु...